I-Lake Madison Condo ilungiswe kabusha
Wentworth, South Dakota, i-United States
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Kirsten
U-Kirsten Ungumbungazi ovelele
I-condo eyakhiwe kabusha eLake Madison. Itholakala e-Wentworth Park, eduze kwe-Broadwater ukuze uthole ukudla okumnandi, iziphuzo, nokuzijabulisa okubukhoma ngesikhathi sasehlobo. Kukhona igceke elikhulu lemidlalo, idekhi yokuphuza ikhofi lakho ekuseni, futhi ujabulele ukushona kwelanga kweLake Madison okumangalisayo kusihlwa. Kunedokhi yangasese yokudoba noma yokubhukuda. Amaminithi ukusuka kwigalofu, yokudlela, kanye nokuhamba ngesikebhe. Cishe amakhilomitha angu-15 ukusuka eMadison. Woza uphumule echibini!
Le yi-condo elungiswe kahle kakhulu engasechibini. Ifakwe ngokugcwele inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokugezela eli-1, nekhishi eligcwele elinesiqandisi, isitofu/uhhavini, i-microwave, nomshini wokuwasha izitsha. Kukhona nesitezi esizimele, esinefenisha ye-patio kanye ne-grill, ngaphandle nje. Sikunikeza ikhofi netiye ekuseni yakho. Useduze nendawo yokudlela emnandi yokudla kwasemini, isidlo sakusihlwa, noma iziphuzo kuvulandi yabo kuyilapho ujabulela ukubukwa nokuzijabulisa okubukhoma ngezimpelaviki.
4.97 ·34 okushiwo abanye
4.97 · 34 okushiwo abanye
I-Wentworth Park iyindawo enhle echibini! Kuhlale kukhona abantu ngaphandle, ezinqoleni zegalofu, futhi abahambahambayo. Ibha ye-Broadwater ne-Grill inokudla okuhle, ukuzijabulisa okubukhoma ngezimpelasonto, nabanikazi nabaxhasi abajabulisa kakhulu. Letha okuntantayo kwakho bese ubophela esitokisini ukuze uphumule emanzini. Ungakwazi nokudoba khona kanye esikhumulweni semikhumbi.
Sihlala imizuzu eyi-15 futhi singatholakala uma kudingeka. Asihlele ukuba nokusebenzelana nezivakashi, ngaphandle uma kukhona okudingekayo.